24/7 राजनीति समाचार
Political news, views and article at your fingertips 24/7.
July 30, 2021	राजनीति 0
March 5, 2021	Featured, राजनीति 0
जनताले काँग्रेसलाई सरकारमा जाने म्यानडेट दिएका छैनन। यसपाली जनताले काँग्रेसलाई प्रतिपक्ष बनाएर पठाएका हुन। र अर्कोतर्फ जनताले काँग्रेसलाई नेकपा फूटाऊ र अपवित्र गठवन्धन गरेर सरकारमा जान भनेका छैनन। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अगाडी भने...
February 15, 2021	Featured, देश/समाज, राजनीति 0
आयोगले अझसम्म किन निर्वाचनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दैन ? सुर्य चिन्हको झगडामा किन अल्झीन्छ?’ ‘एउटै चिन्ह दुईटा पार्टीलाई दिन मिल्दैन, विवाद देखिएपछि सुर्य चिन्ह कसैलाई नदिई अरु नै चिन्ह दिए भै हाल्यो नि।’ उनले भने। ‘निर्वाचन आयोगले अदालतको निर्णय पर्खने होईन, राजनैतिक दलहरुलाई बोलाएर चुनाव चिन्ह दिने र निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडी बढाउने हो। चुनाव गराउने हो।’
February 14, 2021	Featured, देश/समाज, राजनीति 0
काँग्रेसले सोमवार देसभर प्रर्दशन गर्दै भैरहवा। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा सोमबार पुनः देशभर ७७ वटैं जिल्लामा प्रदर्शन र जनसभाको तयारी गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधीसभा विघटनको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमको काँग्रेस, नेकपा भित्रैको प्रचण्ड–माधव समूह, …
February 14, 2021	Featured, राजनीति 0
केपी ओलीको प्रतिगमन कार्यशैली, देसमा वढ्दो महँगी र भष्ट्राचारको विरोधमा काठमाडौंको टुँडिखेल वरीपरी मानव साङ्लोसहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने
February 13, 2021	Featured, देश/समाज, राजनीति 0
January 21, 2021	Featured, देश/समाज, राजनीति 0
मुलुकको संकटको हरेक घडीमा काँग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादलाई मुटुमा राखेर आमनागरिकको भावनालाई आत्मसात गर्दै हरेक क्रान्तिमा अगाडी...
अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध प्रदेसभर विरोध
January 9, 2021	Featured, देश/समाज, राजनीति 0
भैरहवा। नेकपा पार्टीभित्रको किचलोले रुष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोशमा प्रतिनिधीसभा विघटनको गरेको असंवैधानिक कदमका विरोधमा नेपाली कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन जारी राखेको छ। संसद विघटन भएदेखि नै नेपाली काँग्रेसले चरणबद्ध रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी विरोध एवं जनप्रर्दशन गरेको छ। यसैविच काँग्रेस शनिवार देशभरका प्रदेसका ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुमा विशेष कार्यक्रम …
December 29, 2020	Featured, देश/समाज, राजनीति 0
ज्ञानेन्द्रले संविधान कु गर्दा सत्ता गुमाउन पुगी दुर्गतीमा छन्। त्यही अवस्था ओलीले खेप्नु पर्ने अवस्था आउने...
सांसदले भने सरकारले नै कोरोना फैलायो
May 22, 2020	देश/समाज, राजनीति 0
भैंरहवा । सरकार संवेदनशिल नहुदा र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिन पुगेको प्र्रदेस ५का सांसदहरुले चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।
कपिलवस्तुमा वडाअध्यक्ष माथि गाेलि प्रहार
May 1, 2020	देश/समाज, राजनीति 0
बैशाख १९, कपिलवस्तु। कपिलवस्तुमा वडाध्यक्षमाथि गोली प्रहार भएको छ।
रुपन्देहीमा मुद्धासंगै न्यायधिश बढे
भारतीय राजदुुत पुुरीले सरपराईज दिदै प्रदेस ५ को कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका घर–घरमा दौडधुप गरे
प्रधानमन्त्रीको लुम्विनी बास
सरकार कहिकतै विचल्लीत हुदैन : संचारमन्त्री बास्कोटा
कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा ट्रकमा आगलागि (फोटो फिचर)
पत्रकाहरुको प्रोत्साहनको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन मधेशी पत्रकार समाजको माग